၁ (တ) တိုရွန်တို၏တူရကီကောင်စစ်ဝန်ချုပ်၏အတွင်းရေးမှူးကိုအတွင်းရေးမှူး၏ရာထူးတွင်ဝန်ခံရမည်။ II ကို) ထိုက်ခွင့်ပညာသင်ဆု: 1. 1. စာမေးပွဲနေ့စွဲ, တူရကီသမ္မတနိုင်ငံ၏နိုင်ငံသားဖြစ်2နှစ်တာ [ပို ... ]
Karabükမှမြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းများ၊ ıankırıမှ Shears၊ Sivas မှ Sleepers များ
AGÜကျောင်းသားများသည် Deutsche Bahn တွင်အလုပ်သင်အဖြစ်လုပ်ကိုင်မည်
အဗ္ဗဒူလာဂူလ်တက္ကသိုလ် (AGU) သည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ Deutsche Bahn (German Railways) နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီးဥရောပရှိအကြီးမားဆုံးမီးရထားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူဖြစ်သည်။ က [ပို ... ]
Bursa ၏အများပြည်သူသုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းသည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခကိုလျှော့ချရန်ဆိုလာစွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ Bursa ၏အများပြည်သူသုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းသည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခကိုလျှော့ချရန်ဆိုလာစွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ Bursa သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီသည် Bursa Metropolitan မြူနီစီပယ်၏လက်အောက်ခံဖြစ်သည်။ (BURULAŞ) သည်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အတူ 'နေစွမ်းအင် [ပို ... ]
အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းဥပဒေ Metro Station ရှိကလေးများအတွက်သင်ခန်းစာ
Mecidiyeköyမက်ထရိုဘူတာတွင်အလယ်တန်းကျောင်းသားများသည်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုအာရုံစိုက်ရန်အသိပညာပေးအစီအစဉ်တစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ မြေအောက်ရထားသို့အမြန်ဆုံးပြေးသောပြိုင်ပွဲကိုကိုယ်စားပြုသောကျောင်းသားများသည်သူတို့၏ပိုစတာများ၊ [ပို ... ]
CHP ခေါင်းဆောင် Kemal Kılıçdaroğluက IMM မှစီစဉ်သောdüzen Channel Istanbul Workshop တွင်ပြောကြားခဲ့သည်။ Dik ကျနော်တို့တက္ကသိုလ်တက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုပေးတဲ့အစားအစာတွေကိုသူတို့မြှင့်တင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်တွင်အာဇာနည်များ၏ဆွေမျိုးများနှင့်စစ်ပြန်များသည်ထိုငွေကိုကြည့်ကြသည် [ပို ... ]
ရထားပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုကို Nizip မြို့တော်ဝန် Mehmet Sari၊ Nizip Mehmet Sarı၏မြို့တော်ဝန် [ပို ... ]
GOOD ပါတီဥက္ကChairman္ဌ Meral Akşenerက IMM မှစီစဉ်သောİstanbul Channel Istanbul Workshop တွင်ပြောကြားခဲ့သည်။ Akşenerက“ ဒီရုပ်သံလိုင်းဟာအစ္စတန်ဘူလ်ကို ၉ နှစ်ကြာအာရုံမစိုက်ခဲ့ဘူး။ Ecdat ecdat လို့ဘယ်သူပြောတာလဲ [ပို ... ]
Kahramanmaraşမြို့တော်ဝန်ဟောင်း Fatih Mehmet Erkoç၏စီမံကိန်း၊ မီးရထားလမ်းစနစ်သည်စင်ပေါ်တွင်ရှိသည်။ မြို့တော်ဝန်Güngörနှင့် Ak [ပို ... ]
amomamoğlu: Channel Istanbul အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲရလဒ်များ
IMM မှစီစဉ်သော“ Istanbul Channel Workshop tarafından” သည် CHP ခေါင်းဆောင် Kemal Kılıçdaroğluနှင့် GOOD ပါတီဥက္ကChairman္ဌ Meral Aksener တို့၏ပါဝင်မှုဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ အဖွင့်မိန့်ခွန်းကို Istanbul Metropolitan Municipality ၏ဥက္ကPresident္ဌ Ekrem amomamoğluက“ Istanbul, Kanal [ပို ... ]
Kayseri သည် ၂၀၂၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ခရီးသွားနှစ်ဖြစ်သည်
Kayseri မြို့တော်စည်ပင်သာယာ၏မြို့တော်ဝန် Memduh Büyükkılıçသည် Erciyes တွင်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးတွင်မြို့တော်ဝန်ဘူယက်ကီကလိစ်သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်အကဲဖြတ်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ တွင်ပြုလုပ်မည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုပေးခဲ့သည်။ 2019 ခုနှစ်တွင်မြို့ 2020 ဘီလီယံ 2019 ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည် [ပို ... ]
ကမ္ဘာ့ပထမ ဦး ဆုံးအမြန်ဆုံးမောင်းနှင်မှုရထား
တစ်နာရီ ၃၅၀ ကီလိုမီတာနှုန်းဖြင့်မောင်းနှင်နိုင်သည့်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးမောင်းသူမဲ့ရထားကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်စတင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒီရထားဟာပေကျင်းမြို့တော်နဲ့ ၂၀၂၂ ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပွဲတော်ကျင်းပမယ့် Zhangjiakou မြို့ကြားမှာပြေးဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်နှုန်းမြင့်ရထားနည်းပညာအတွက်တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ [ပို ... ]